I-farmguesthouse 'Jetske' e-Hitzum - I-Airbnb
I-farmguesthouse 'Jetske' e-Hitzum
Ikamelo e-iqhugwane ibungazwe ngu-Jitty
Uzohlala nomlimi osenga izinkomo ezingama-200, lapho kukhona ithuba lokubheka ngemuva futhi, uma uthanda, ukwelula isandla.
I-Hitzum iyidolobhana eliphakathi kwe-Franeker ne-Harlingen, ihora nje ukusuka e-Amsterdam. UFraneker noHarlingen baphakathi kwamadolobha angu-11 aseFriesland.
Indlu enhle engadini evaliwe ene-jaccuzi kanye nombono endaweni yasemaphandleni
I-Hitzum iyidolobhana eliphakathi kwe-Franeker ne-Harlingen, ihora nje ukusuka e-Amsterdam. UFraneker noHarlingen baphakathi kwamadolobha angu-11 aseFriesland. E-Franeker ungavakashela i-planetarium ye-Eise Eisinga. https://www.planetarium-friesland.nl/
E-Harlingen ungachitha usuku oluhle namakhefi nezitolo eziningi. Kodwa futhi ungangena esikebheni ukuze uvakashele iziqhingi ezi-1
Ungakwazi futhi ukujabulela imvelo enhle, yebo sinezindawo zodaka eziqhele nje ngokulahlwa kwetshe, kodwa ungakhohlwa umzila odumile wokuhlatshwa, olungele ukuhamba ngamabhayisikili noma ukuhamba ngezinyawo.
Ngemuva kwakho konke okuvelayo ungahlala ekhaya lethu futhi udle ngokuthi 'what the pot schaft' bese ujabulela i-jaccuzi ngengilazi emnandi yewayini noma ubhiya.
Kunobumfihlo obuningi nokuthula.
Isidlo sasekuseni somlimi esiphundu singanikezwa, lokho okuhlanganisayo kuyisimangaliso esikhulu, kodwa umkamlimi ngokuqinisekile ngeke akudumaze.
Uma ufuna ukuza neqembu elikhulu, buza ngamathuba. Umlimi nomkakhe bavuleleke kukho konke!
4.29 out of 5 stars from 129 reviews
4.29 · 129 okushiwo abanye
Itholakala kokubili ngocingo kanye nomuntu. Sihlala silindele ingxoxo uma ufuna